SlickText: Gini bu njiri mara na mmekorita nke SMS Platform Platform? | Martech Zone
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche banyere ozi ederede dị ka ike izipu ozi ederede na onye debanyere aha. Agbanyeghị, ozi SMS na ozi MMS agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ. Ewezuga ihe nnabata chọrọ, usoro ịre ahịa ozi ederede agbanwewo nke ọma na plethora nke ntinye aka, akpaaka, nkewa, ịhazi onwe ya, yana ike mwekota.
SlickText bu ihe ederede ederede juputara na ngosiputa nke juputara na ahia nke choro ime akwukwo n’enye ndi ulo oru ndi choro itinye aka na SMS na MMS n’ime ahia na ahia ha.
SlickText Platform Isi
Ederede ederede nwere ike dị ịtụnanya na nsonaazụ dị ịtụnanya. Fọdụ n'ime ihe ndị ị nwere ike ime na a ederede ozi n'elu ikpo okwu dị ka SlickText bụ:
Ederede iji sonyere - Ndị mmadụ nwere ike ederede iji sonyere aha ahịa SMS gị site na izipu isiokwu pụrụ iche na obere nọmba ekwentị akpọrọ a shortcodes. Isi okwu obula bu ihe puru iche ma gosiputa ederede ederede ya. Na SlickText, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ma dozie koodu nke ha.
Ederede gaa votu - mepụta nghoputa otutu ajuju na nchikota data nke ndi debanyere aha na ndi n’abughi ndi nwere ike itinye aka site na ozi ederede. Nwere ike ịkewa aha gị site na ozi ị chịkọtara ma weghachite ndị debanyere aha gị na ozi ederede n'ọdịnihu.
Ederede iji merie - Asọmpi na asọmpi bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị wee wuo ndepụta gị n'otu oge! Mee ka ndị mmadụ dee ederede gị na 31996 iji tinye maka ohere iji merie. Ikpo okwu na-arụ ọrụ, na-agba ọsọ ma mezue asọmpi gị. Ha na-enye ndị meriri gị onyinye na-enweghị usoro ma anyị na-eme ya niile 100% na akpaghị aka.
Otu Onye - Ọtụtụ oge ị ga - ahụ onwe gị inye onyinye pụrụ iche pụrụ iche maka ndị debanyere aha ọhụrụ ndị sonyere na ndepụta ahịa ederede gị. Iji gbochie ndị mmadụ iji mkparị ahụ mee ihe, njirimara a na-enye onye ọ bụla ohere ịnabata azịza akpaaka gị ozugbo. Ọ bụrụ na ha pụọ ​​ma wee pụọ, ha ga-enweta ozi ịnabataghachi.
Nyocha nyocha SMS - mepụta nyocha ọtụtụ ajụjụ na nchịkọta data nke ma ndị debanyere aha ma ndị na-abụghị ndị debanyere aha nwere ike itinye aka na ozi ederede. Nwere ike ịkewa aha gị site na ozi ị chịkọtara ma weghachite ndị debanyere aha gị na ozi ederede n'ọdịnihu.
Kupọns ekwentị - ewu ọmarịcha mobile Kupọns iziga gị patrons. Ha bụ customizable zuru oke ma tinye nkwado POS barcode. Kupọnda ọ bụla na-enyekwa nkọwa zuru ezu na mmekọrịta ọ bụla onye ọrụ nwere na onyinye gị.
Nkwụghachi Ụgwọ - Mwepụta usoro nkwụghachi ụgwọ nke iguzosi ike n'ihe nke na-eme ka njigide ndị ahịa na-eme ka ndị mmadụ laghachi. Ihe omume mmemme anyị nke iguzosi ike n'ihe dị mfe ma dị mfe iji. Gị ahịa bụ n'aka hụrụ ya n'anya!
Akwụkwọ ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ - Mfe nakọta ụbọchị ọmụmụ ndị mmadụ mgbe ha debanyere aha na ederede gị. Mgbe ahụ, mgbe ụbọchị pụrụ iche ha bịarutere, sistemụ anyị ga-ezitere ha ozi ederede ụbọchị ọmụmụ gị na akpaghị aka. Nwere ike ịchịkwa ihe niile! Literally setịpụrụ ya n'ụzọ nkịtị ma chefuo ya!
Jiri CODE Nwachukwu maka 15% Gbanyụọ!
Ina SlickText malitere
SlickText Text Message Platform Atụmatụ:
Zipu Ozi ederede Mass - Ma ị nọ na kọmpụta ma ọ bụ na ọ na-aga, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla izipu ederede gị.
Ozi ederede Scheduling - Mfe hazie ederede ederede iji pụọ na ụbọchị na oge ọ bụla. Can nwere ike ịtọ otu ozi, ma ọ bụ lekọta ọnụ ahịa dị ọtụtụ ọnwa n'otu oge. Nwere ike ịgbanye ozi gị na-ahazi ha ka ị na-eme ya kwa ụbọchị.
2 Textzọ Text Izi ozi - Inboxing / 2-way ederede ozi na-enye ohere ndị debanyere aha ịza gị mkpọsa na-ezitere gị ozi ederede. Ọ bụ ụzọ dị mma iji jikọta ọnụ ma zaa ajụjụ ndị mmadụ nwere. A isi ederede ederede ozi ederede na onye ọ bụla kwesịrị iji.
MMS / Izi ozi Foto - Mfe itinye ihe osise na nke ọ bụla n'ime oku ederede gị iji bulie aka na nzaghachi ọnụego sitere n'aka ndị debanyere aha gị. Na mgbakwunye, MMS na-enye gị ohere izipu ihe ruru 1,600 ederede n’ozi gị.
Na-aza onwe - nke a makwaara dị ka autoresponders SMS, azịza akpaaka bụ ozi akpaghị aka nke ndị ahịa gị na-enweta mgbe izipu ederede gị na koodu mkpirisi. You nwere ike ịnye mkpali, zaghachi na onyonyo, jụọ ajụjụ ndị ọzọ, na ọtụtụ ndị ọzọ!
Ubi Omenala - nye gị ohere ịchekwa data data na kọntaktị gị na mgbakwunye na mpaghara ọkọlọtọ dị ka aha, email, wdg. lekwasị anya na mkpọsa gị.
Personalization - Ndị kọntaktị gị karịrị naanị nọmba ekwentị na ndepụta. Na-akpọ nke ọ bụla aha. Njirimara a na - enye gị ohere ijikọ aha mbụ, aha ikpeazụ, na ndị ọzọ n’ime ederede ederede otu gị.
Nchịkọta zuru ezu - Nweta ụfọdụ nghọta bara uru dị na mbọ ahịa ahịa ederede gị. Na ihe niile site na nbanye / pịpụta eserese gaa na stergrafi ala na njikọta nsuso, SlickText emeela ka ị kpuchie ihe niile dị mkpa ị chọrọ ịma.
Agba nke Ndi ana-akpo gi - mepụta subgroups n'ime ederede ederede ederede gị dabere na data ndị debanyere aha dị ka koodu mpaghara, obodo, steeti, ụbọchị edepụtara, na ndị ọzọ.
Drip mkpọsa - ihe eji akpaghị aka na-enye gị ohere izipu usoro ederede ederede oge na ndị debanyere aha mgbe ha sonyere na ndepụta ederede gị. Ọ bụ ngwa ọrụ bara uru na-enyere gị aka iso ndị debanyere aha gị na-emekọrịta ihe.
Ikwugharị ozi - Mkpa ka izipu ozi na mgbe niile? Ihe omume a na - enye gị ohere izipu ozi ederede akpaghị aka site na ịkọwapụta ụfọdụ ozi dị mkpa. You nwere ike ikwugharị ozi kwa ụbọchị, kwa ọnwa, izu abụọ, n’ụbọchị ụfọdụ n’izu ma ọ bụ ọnwa, wdg. Nhọrọ enweghị njedebe.
Ofụri Esịt Na-apụta Mobile App - Jikwaa usoro ozi ederede gị niile na ngwa ngwa ekwentị n'efu. O nwere otu ezigbo atụmatụ anyị na desktọọpụ na-enye ma na-akwado Apple na gam akporo.
Nkwenye afọ - N’ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịchọpụta nanị onwe gị ịchọrọ ịzụ ndị mmadụ karịa afọ ole na ole. Naanị tụgharịa na nkwenye afọ, setịpụrụ afọ gị chọrọ na ndị ọrụ ga-aza ụbọchị ọmụmụ ha tupu ị debanye aha. Naanị ndị ruru afọ chọrọ nwere ike isonye!
Fordị Ntinye Weebụ - Wụpụta ụdị ọpụpụ-enwere ike iji rụọ ọrụ dị ka peeji ọdịda, na kiosks, na mbadamba, ma ọ bụ tinye na weebụsaịtị gị. SlickText ụdị na-ewu ụlọ na-eme ka ọ incredibly mfe ewu ndị a iche-iche na-enweghị ihe ọmụma ọ bụla nke imewe ma ọ bụ koodu.
Njikọ Nwepu - Họrọ ndị mmadụ site na iji njikọ nke njikọ. Njikọ opt-iche anyị nwere aha iche iche nyere anyị ezigbo ụzọ iji bulie ndepụta gị. Naanị pịa otu na ekwentị mkpanaaka ọ bụla na ngwa izipu ozi ga-emeghe ọnụ ọgụgụ na isiokwu akpaaka.
Ederede ka ịdenye aha - Njirimara a na - enye gị ohere ijide adreesị email nke ndị debanyere aha mgbe ịbanye na ndepụta ederede gị. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji bulie mbọ ị na-azụ ahịa email gị yana yana ire ahịa ederede. Site na dashboard gị, ị nwere ike ibupụ ozi ịntanetị gị anakọtara ozugbo na ndị na-eweta ahịa email kachasị amasị gị.
Njikọ Email - Mekọrịta ozi ịntanetị na-akpaghị aka gị na ọrụ ịre ahịa email kachasị amasị gị dị ka MailChimp, Kpọtụrụ Kọntaktị, ActiveCampaign, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe a niile na - eme na ezigbo oge ma ọ chọghị itinye aka gị. Dị nnọọ ka ọ na ka data igba.
Shopify Mwekota - Ntinye aka nke SlickText na Shopify na-enye gị ohere ịnye nhọrọ maka ndị ahịa ịbanye na listi ahịa SMS gị na ndenye ọpụpụ. Ọzọkwa, ọ na-eme ka data sitere na Shopify gaa SlickText ka ị nwee ike ịmepụta ngalaba ndị na-edebanye aha, lekwasịrị ndị mmadụ anya na ịzụrụ, ma zipụ ozi SMS ụgbọ ala agbahapụ.
Njikọ Facebook - Gbuo nnụnnụ abụọ jiri otu okwute were na njikọta Facebook anyị. Na dị nnọọ 1 mmezi click, ị nwere ike obe-biputere gị ozi ederede ka Facebook dị ka mma. Ọbụna ị nwere nhọrọ nke ịmegharị akwụkwọ Facebook gị ka ọ nwee ike ịdị iche na ederede gị! Lelee Vidio ahụ!
Mmekọrịta Zapier - Zapier bụ ọrụ na ejikọ ngwa na ngwanrọ ka enwere ike iji ha ọnụ. Ngwakọta anyị nke Zapier na-enye gị ohere ijikọ SlickText na ihe karịrị ọrụ 1,100 na-ewu ewu nke ndị mmadụ na-eji kwa ụbọchị.
API OWU - Ma ị bụrụ onye nrụpụta nọọrọ onwe ya ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, SMS REST API ga - ekwe ka ngwa gị bido ide ozi n’ekwe ntị!
Ọgba Weebụ - Mkpa ka weghara ezigbo oge data na ihe na-eme na akaụntụ gị? Weebụ webhook anyị bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe maka ngwa gị iji nweta ozi mgbe ihe ndị ahụ mere.
Mmekọrịta data - have nwere data ntinye aha pụrụ iche nke ịchọrọ ịkewa dabere? Anyị na-eme ka ịmekọrịta ozi niile ahụ na ndị debanyere aha gị dị mfe site na ịpị aka ole na ole.
SlickText nwere ihe niile nzukọ gị chọrọ iji wuo ma jikwaa ụgbọelu na CTIA kwenyere mmemme ahia ederede ederede - tinyere njikwa kọntaktị na-akparaghị ókè, nyocha abuo abụọ (2FA), nchekwa nchekwa, nkwado ọtụtụ ndị ọrụ, yana atụmatụ nwere ike ịba ụba na-enweghị nkwekọrịta.
Na mgbakwunye, anyị na-enye ọtụtụ ngwa ahịa azụmaahịa SMS yana akụrụngwa agụmakwụkwọ maka onye ọ bụla na-achọ ịzụlite ihe ọmụma ha ma mezie nka ha.
Ngosi: Abụ m mmekọ SlickText.
Tags: afọ nkwenye ederede oziụbọchị ọmụmụ ozi ederedectiaSMS na Facebookmms ahiaZụọ smsederedeSMS autorespondersSMS n'asọmpisms Kupọnssms igbesms iguzosi ike n'ihesms usoro ihe omumesms nkewasms nyochaozi ederede akpaakan'asụsụ ederede n'asọmpiụdị ederedeederede ederede ahiaederede ederede ịtụ vootuozi ederedeederede iji votuederede iji merie